Marta Gracia Pons. Ajụjụ ọnụ ya na onye dere akwụkwọ akụkọ The Dragonfly's Journey | Akwụkwọ ugbu a
Marta Gracia Pons. Ajụjụ ọnụ gị na onye edemede nke Njem Dragonfly
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 04/09/2021 12:00 | Emelitere ka 05/09/2021 19:45 | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Novela
Foto. Marta Gracia Pons, profaịlụ Twitter.
Marta Gracia Pons bụ onye edemede na onye nkuzi. Ọ gụsịrị akwụkwọ na History site na Mahadum Autonomous nke Barcelona ma nweekwa nzere masta na Pedagogy. O dere aha dị ka Akụkọ gbanwere anyị, agịga akwụkwọ y Isi nke ụbọchị obi ụtọ, na akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ya bụ Njem ọwa mmiri. Na nke a Ajụjụ ọnụ Ọ na -ekwu maka ya na gbasara isiokwu ndị ọzọ. Ị Enwere m ekele oge gị na obiọma gị nke ukwuu inyere m aka.
Pons Marta Gracia - Ajụjụ ọnụ
OZI AKWỤKWỌ: Akpọrọ akwụkwọ akụkọ ọhụrụ gị aha Njem ọwa mmiri. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
MARTA GRACIA PONS: Akụkọ a bụ a Njem nlegharị anya nke Barcelona nke afọ abụọ, nke mmalite narị afọ nke iri abụọ na nke oge agha. Kpakpando ya ụmụ nwanyị abụọ dị nnọọ iche n'ebe ibe ha nọ, ndị na -ebi n'ọnọdụ akụkọ ihe mere eme dị iche iche, mana ọmịiko ha nwere maka ịchọ mma jikọtara ọnụ.
Echiche a sitere n'ọchịchọ m nwere maka Modernism na Art Nouveau. Anyị maara Gaudí na nhazi ụlọ, mana amachaghị banyere nnukwu ndị na -edo ọla edo nke mmiri nka a. Mgbe ahụ achọpụtara m Lluís Masriera na ọmarịcha nnụnụ mara mma. Oge ọhụụ maka ọla, ebe e kere ụmụ ahụhụ ihe atụ, nymphs na akụkọ ifo. Ha mere ezigbo ọrụ nka.
MGB: Ee, ọ kara m akara nke ukwuu, n'oge uto m, Ntụ nke Angelanke Frank McCourt dere. Akụkọ siri ike banyere Ireland nke 30s na 40s.
Akụkọ mbụ m dere-ma bipụta onwe ya-bụ akụkọ ihe mere eme setịpụrụ ógbè Huesca n'ime afọ Ọchịchị aka ike nke Primo de Rivera na Republic nke Abụọ. Ọ bụ ya bụ ezi ezi m na onye mụ na ya mụtara ide ihe.
MGB: Ken Follet. Mụ na ya malitere inwe agụụ maka akwụkwọ na ekele ya amụtara m ide akwụkwọ akụkọ ihe mere eme.
MGB: Omume nke Emmanke Jane Austen dere.
MGB: Amaghị m nke ọ bụla. Naanị otu ahụ Akpọrọ m asị nwa nkwụsị.
MGB: Enweghị m ebe pụrụ iche: M na -ede ebe ọ bụla m nwere ike, tebụl na laptọọpụ ezuola m. Agbanyeghị, m na -edekarị n'ụtụtụ. Abụ m onye 100% ụbọchị, yabụ enweghị m ike ide ihe n'abalị. Ọ na -amasị m ịlakpu ụra n'isi ụtụtụ ka m wee nwee ike mee nke ọma n'ụtụtụ echi ya.
MGB: Ọ masịrị m Akwụkwọ akụkọ Bekee: Jane Austen, Charles Dickens, na ụmụnne nwanyị Bronte bụ ọkacha mmasị m.
MGP: Ugbu a Anaghị m agụ akwụkwọ akụkọ ọ bụla, kama akụkọ ihe mere eme, Ọ dị mma, m na -ede akwụkwọ maka onwe m maka akwụkwọ akụkọ ọzọ, nke edobere na njedebe narị afọ nke XNUMX na Madrid.
Ndị: Kedu ka i chere ihe nkiri a dị? Ị chere na ọ ga -agbanwe ma ọ bụ meela ya na ụdị okike ọhụrụ dị ebe ahụ?
MGB: Ụwa na -ebipụta akwụkwọ nwere onye asọmpi siri ike: nyiwe ihe onyonyo. Ọbụlagodi, dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo na agbanyeghị njide ejidere n'afọ gara aga, ndị na -agụ akwụkwọ etoola, ọkachasị n'ọgụgụ dijitalụ. Nke a na -egosi na, n'agbanyeghị mkpọtụ, ezigbo akwụkwọ ọgụgụ na -ejidekarị onye na -agụ akwụkwọ kacha nwee ntụkwasị obi.
MGB: Obi abụọ adịghị ya na anyị ebiela oge jọgburu onwe ya n'ime afọ abụọ gara aga nke ọrịa a. Mgbe ụfọdụ, ọ gaghị ekwe omume ịgbanahụ ụwa n'ezie. Ma anyị bụ ọtụtụ ndị na- anyị anwa anwa bipụta n'ime afọ gara aga na mmadụ na -enweta ọtụtụ ozi oma na ekele sitere n'aka ndị na -agụ akwụkwọ, ndị ibe anyị nabatarala. Ndụ a na-aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Marta Gracia Pons. Ajụjụ ọnụ gị na onye edemede nke Njem Dragonfly
Javier Reverte: Akwụkwọ
Enwe nke anọ